Vandaag nog een ReachOut-musuo wako wekutaurira shoko rako vanot netwerk van vrijwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers vaujwilligers.
Munhu wose anoda Rhapsody of Realities semudzidzi wekudzidza Bhaibheri, zvikurukuru vashumiri veEvhangeri. Bharai iyi inosangana netaneti, uye tibatsire vashumiri munyika yose vakawana pfuma yakafuma yeShoko muRhapsody of Realities.
Tiri vanhu veIndaneti vevanhu vanoshushikana vari kushandisa ruzivo rwekombiyuta kuti vashandise nyika yeIndaneti neEvhangeri. Join the Rhapsody Influencers Network (RIN) nhasi!
Ngatitorei pasi rese yevashanduri vane basa rekuita kuti Shoko raMwari riwanike uye riwanike kuvanhu vose mumutauro wavanonyatsonzwisisa.
Rhapsody Prayer Partners ‘Network Web App
Rhapsody Prayer Partners 'Network Web App ndiyo chikwata chevanhu vose vakagadzirira kunyengeterera kupararira kweShoko raMwari munyika yose, kuburikidza neRhapsody of Realities. Bhurai nhasi, tumira chikumbiro chako chekunyengetera uye rega tibatane maoko pakuita hupenyu muhupenyu hwevamwe uye hupenyu hwedu!
Rhapsody Daily Article Sharing Platform
Rhapsody Daily Article Sharing Platform inyore uye iri nyore kushandisa webhuti webhu inoita kuti zvive nyore kugovera nyaya yemazuva ose. Inokurudzira kugovana zvakare uye panguva imwechete inopa zvinyorwa zvakarurama zvekuparadzirwa kwakaitwa; zvose munzvimbo imwe !!
Ita zvakawanda neRhapsody of Realities! Tarisa Rhapsody TV, Rhapsody Travels uye Rhapsody Dailies.
Iwe unoda kudzidza kudzidza kurarama hupenyu hunokunda uye hune chinangwa here? Uri kutsvaga dzidziso dzinonzwisisika uye mhinduro dzeShoko kune imwe yemibvunzo mibvunzo yakawanda here? Nhamba yedu yakawanda yemabhuku akazodzwa ichakuunza chiitiko chinogutsa uye uchinje hupenyu hwako nokusingaperi! Nzvimbo iyi inongororwa nepamusoro pemabhuku ose nemunyori anonyanya kutengesa, Pastor Chris Oyakhilome D.Sc., D.D.
Dzidza zvakawanda zveRhapsody of Realities paya! Yayo nyika itsva yose yekufuridzirwa uye simba raMwari rose rakaputirwa muRhapsody of Realities Mobile app yakagadzirwa zvakanaka.